BUDDHIST TERMS' Dictionary: HEEDFULNESS - အပ္ပမာဒ
HEEDFULNESS - အပ္ပမာဒ
အပ္ပမာဒ - မမေ့လျော့ခြင်း၊ မမေ့လျော့ကြောင်းတရား၊ သတိတရား။
စိတ်အစဉ်တွင် ကပ်၍တည်နေသော ဉာဏ်နှင့်ယှဉ်သော သတိပင်ဖြစ်သည်။ ဤအပ္ပမာဒတရားသည် အလွန်အရေးကြီးသော တရားဖြစ်သည်။ ကုသိုလ်တရားတို့၏ အချုပ်အခြာ ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအများဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ပင် မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် ဤတရားနှင့် ပြည့်စုံစေရန် “အပ္ပမာဒေန ဘိက္ခဝေ သမ္ပာဒေထ” ဟု အကြိမ်ကြိမ် ဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။ အပ္ပမာဒတရားသည် မသေခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သည်။
Heedfulness is the mental process of mindfulness combined with knowledge. It is synonymous with mindfulness. It is the predominant factor in the accomplishment of meritorious deeds. The Buddha himself made the exhortation “be endowed with heedfulness” repeatedly. Heedfulness is the way to the Deathless.
See also MINDFULNESS.